အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ..
33 Responses to “ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ..”
ဘာရှာမလို့လဲ ပြော ...
ချောလက်ချက် မိသွား ...
ပန်းလေးတွေလဲ ပါ ...
ခရမ်း စိမ်း ပြာ ရောင်စုံနှော
ဖိုတိုရှော့ပ်နဲ့ ရော ...
အံ့ပါရော အံ့ပါရော ...။ ... ။
ဟိဟိ ချောပုံတွေကြည့်ပြီး ကဗျာစပ်လိုက်တယ်။
ငှက်ပုံလေးတွေကို လေဘယ်တပ်ထားတာ မိုက်တယ်။ :))
Haveanice trip, sis! Will be missing you. Buy present for me naw :). Birds photo are so nice. Ama Chaw, let me use the red roses photo. Thank you.
ဓာတ်ပုံတွေ တကယ်လှတယ်..ပရိုအတိုင်းပဲ..ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီး ရိုက်ခဲ့နော်..ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရီးလေး ဖြစ်ပါစေ..ပြန်လာရင် ခရီးသွားတဲ့အကြောင်းလေး ဖတ်ဖို့စောင့်နေမယ်
မချော ခရီးသွားနေသည် ပေါ့။
ကင်မရာလေးတစ်လုံးနဲ့ ဟိုဘက်ချိန်လိုက် ဒီဘက်ချိန်လိုက်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး ခပ်ချောချောတစ်ယောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နေရာမှာ တွေ့မြင်ခဲ့လို့ ရှိရင် အဲဒါ အခြားသူမဟုတ် မချောဟု မှတ်ယူစေလိုကြောင်းးးး။း)
ကျန်းမာချမ်းသာစွာ ခရီးသွားပြီး ဘေးကင်းရန်ကွာ ကျန်းမာပကတိ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး ပို့စ်များများ တင်နိုင်ပါစေ။
အမ ဘယ်ကိုင်းမှာ ထပ်နားလို့ ရသးလဲဟင်????
မှားလို့ သး မဟုတ် သေး
Deep blue rose is my favorite..
I Wish YouaPleasant and Safe Journey
ငှက်လေးတွေ ကိုယ်စား.. ပြောပေးသွားတဲ့ စကားတွေက.. ဟတ်ထိတယ်... ဟတ်ထိတယ်ဗျို့
(လိုချင်တဲ့ပုံယူဆိုလို့ မ ...သွားပြီ ဘန်ကောက်လာရင် ကြည့်ပေါ့ ဟွန်း ဟွန်း)
အားကျလိုက်ထှာ...... မချောကတော့ ကင်မလောင်ကြီးနဲ့ ရွှေပြည်တော်တစ်ခွင် ခြေဆန့်တော့မယ်ပေါ့လေ.... ပုံတွေ အများကြီး ယူလာခဲ့နော်... သွားလမ်းသာလို့ လာလမ်းဖြောင့်ပါစေ ခင်ဗျား...
ငှက်တွေကိုရိုက်ထားတာ ကြည်လင်ပြတ်သားနေတာပဲ...။ ဘလော့ဂါဆိုတာ ဖိုတိုဂရပ်ဖါတပိုင်းပါပဲ.....။ ခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူးပါစေနော်ချော...။ ပြန်လာမှ ခရီးသွားပို့စ်လေးဖတ်ရမယ်...။
ဘလော်ဂါများရှေ့ စကားများများမပြောရ ငှက်လေးတွေလဲ အလွတ်မပေး ပန်းလေးတွေလဲ အမိဖမ်း
အစိမ်းရောင်နှင်းဆီလေး ရေလည်မိုက်တယ်ပြောမလို့ .. တူက ပြင်ထားတာဒဲ့ ........
အထူးသဖြင့် ပန်းရောင်နောက်ခံနဲ့ ငှက်လေးရယ် တောင်ပြာတန်းနဲ့ ချယ်ရီရယ်ကို ရေလည်ကြိုက် ....
မချောကတော့ ခရီးထွက်တာတောင် ပို့စ်တွေကို Schedule နဲ့ စီစဉ်ခဲ့သေးတယ်၊ စာဖတ်သူတွေအတွက် အလေးထားတဲ့ စိတ်ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ..၊ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ငှက်ပုံလေးတွေကို သဘောကျ သလို မမေရဲ့ ကဗျာကလည်း ရယ်ပြုံးချင်စရာ...၊း) ချောမွေ့သာယာတဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါစေ မချောရေ...။
၀ါးးးးးးး ငှက်ပုံတွေ အများကြီး ကြည့်ရတယ်ဟေ့....။ ၀ိဝါဒ ကွဲပြားခြင်း ဆိုတဲ့ ပုံက ဗွတ်ဖင်နီ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ အကောင်လေး ။ အစ်မအိုင်အိုရာ ပြောတဲ့ ငှက်တော် (Black Drongo) ကလဲ အရွယ် မရောက်သေးတဲ့ (Juvenile)လေးဖြစ်ပုံရတယ်။ အောက်ဆုံးက အကောင်က ငှက်တော် တစ်မျိုး (Bronze Drongo)ဖြစ်မလားပဲ။ ခရီးသွားရင် ပုံများများ ရိုက်ခဲ့ပါဗျိုးးးးးးးးးး
တူးဘီ (2B ) said...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါစေ မချောရေ။
ရွာသူ (village372) said...
မချော ရိုက်ထားသမျှပုံတွေက အမြဲလှလွန်းလို့ ကျွန်မစက်မှာ ပုံတွေလည်းပြည့်နေပြီ။ ခုလည်း ခရီးထွက်ပြန်ပြီဆိုတော့ .....။
ပြီးရေးထားသမျှစာတွေဖတ်ရတာလဲ ပျော်စရာလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ မပျင်းဘူး။ လမ်းခရီးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ စာတွေ၊ ပုံတွေ အများကြီးဖတ်ဖို့ ပြင်ထားမယ်နော်။
ရေနဂါးနှစ်မှာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ၊
သွားနိုင်သူတွေ သွားကြပါ...ရိုက်နိုင်သဘောက်ရိုက်ပြပါ...သွားပိုင်ခွင့်မရှိလို့ သများပြသမျှ ငေးရတယ် မောရတယ်...
အမချော ရဲ့ခရီးစဉ် ဖြောင့်ဖြူးပါစေ...ဓာတ်ပုံအများကြီး သားသားအတွက် ယူလာနော်...
စဉ်းစားကာ နေရဦးမယ်၊ အလိုမကျဘူး၊ ဖင်ချင်းပေါက်နေတဲ့ ပျား၂ ကောင် အဲ့သည်ပုံတွေ သိပ် လှတယ်အစ်မချော။ နှင်းဆီ အရောင်စုံတွေ သိပ်မမြင်ဖူးလှတော့ အထူးအဆန်း ကြည့်သွားတယ်။
ဟဲဟဲ ဘာရှာပုံတော်လဲ ..... လို့ ... မမေးပါဘူးနော်လို့ ။ ဟီးဟီး :P
ပျော်ရွင်ဖွယ်ခရိးစဉ်လေးဖြစ်ပါစေ မမရေ..ဓါတ်ပုံဆရာ တော်လို့ဖြစ်ရမယ် ပုံလေးတွေက အသက်ဝင်လိုက်တာ...လို့...:):)
ပြန်လာရင်လဲ ဒီလိုပုံလေးတွေများများတင်နော် ကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ် တစ်ကယ့်ကိုစိတ်ရှည်
ခရီးက ပြန်လာရင် ဗဟုသုတတွေ ပြန်မျှဦးနော် မချော... မချောကလဲ ဓာတ်ပုံ မရိုက်တတ်ဘူး ဆိုလို့ သာဘဲ... ပုံတွေက အရမ်းလှပြီး အသက်ဝင်နေတယ်... တော်တော်လေး ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်... တကယ်...
ဒေါ်ချောပြန်လာရင် လက်ဖွဲ့ပေးဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပါကြောင်းဗျား...
ဘွတ်ဖင်နီကို ငယ်ငယ်က အမျိုးတွေဆီသွားရင်း မြင်ဖူးတယ်။ အဝေးကပါ။ ခုမှအနီးကပ်မြင်ရတော့တယ်။ ပန်းတွေနာမည်ပေးထားပုံကတော့ စာရေးဆရာလက်မြှောက်လောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခံစားသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားနေတာ။ နှင်းဆီပန်းအရောင်တွေက ထူးဆန်းလိုက်တာလို့။ နောက်မှ နောက်ထားမှန်းသိတော့တာ။